Onye na - egbu egbu bu ihe ojoo “60% nke onu ogugu uwa” dika onye okachasi - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Coronavirus na-egbu egbu "nwere ike imetụta 60% nke ụwa" dịka otu ọkachamara si kwuo - SANTE PLUS MAG
Ugbu a akpọrọ Covid-19, coronavirus gafere akara ọnwụ 1000 na Tuesday February 11 na ọnwụ karịrị 1113 na China na ihe karịrị 44.650 gosipụtara na ikpe ahụ. Dabere naWHO, mmụba nke usoro mbufe na mpụga obodo nwere ike ibute mgbasa zuru oke, n'agbanyeghị nkwụsị nke ụgbọ elu na-aga China na usoro ndị mba dị iche iche nakweere iji gbochie ndị njem si ebe ahụ. . N’iburu ogo ihe mepere emepe, ụfọdụ ndị ọkachamara na-eche maka evolushọn ya. Prọfesọ Gabriel Leung, onye isi nke ngalaba ahụike ọha na Mahadum Hong Kong na-ekwu na coronavirus “nwere ike imetụta pasent 60 nke ndị bi n'ụwa” ma ọ bụrụ na achịkwaghị ya. Nkwupụta nke igwe mgbasa ozi Britain gbakọtara The Guardian ma zitere ya Sudinfo, BFMTV na New York Post.
coronavirusAKAMAGmondialeọnụ ọgụgụ mmadụpourraitahụ ikedị ka
Camilla Parker Bowles weputara mkpuchi ọhụrụ nke onye sere uwe agbamakwụkwọ ya bịanyere aka na ya
Moussa Diao na-enye ume Oryx ntụziaka ọhụrụ - Jeune Afrique